Zimbabwe: Maalinta dhalashada Mugabe oo noqon doonta “Maalin ciid qaran” – Kasmo Newspaper
Zimbabwe: Maalinta dhalashada Mugabe oo noqon doonta “Maalin ciid qaran”
Updated - November 28, 2017 11:26 am GMT
London (Kasmo), In kasta oo cadaadis dadweyne uu isku casilay, iyo waliba tillaabadii Militarigu qaadeen, haddana Robert Mugabe, Madaxweynihii hore ee Zimbabwe, waxaa lagu sharfay in maalinta xuska dhalashadiisu noqoto “Maalin qaran” oo shaqada laga nasto.
Sida uu qoray Wargayska Xukuumadda ee “The Herald”, waxaa Jimcihii lagu soo saaray Tirsigii 143aad ee Faafinta Rasmiga ah “Official Gazette” ee Dowladda, go’aan horey loo gaaray bishii Agosto oo ahaa in 21ka Febrayo noqoto “Robert Gabriel Mugabe National Youth Day”.
Maalinta arrinta rasmiga laga dhigay, Jimihii, 24kii Nofember 2017, waxay ku beegnayd, caleema-saarkii iyo dhaartii Madaxweynaha cusub ee 75 jirka ah, Emmerson Mnangagwa, oo horey u ahaa gacanta midig ee Mugabe, markii damabana khilaafku soo dhexgalay.
Mnangagwa wuxuu toddobaadkii hore ku adkaystay in Mugabe la xurmayn doono, lana siin doono aqoonsiga uu mudanyahay oo ah in uu ka mid yahay asaasayaashii iyo hoggaamiyihii Zimbabwe. Wuxuu kale oo khudbaddiisii caleemasaarka ku xusay in Robert Mugabe ahaan doono waligii “aabbe, la-taliye, jaalle iyo hoggaamiyihiisa”.